We Fight We Win. -- " More than Media ": ဝိုင်းပြီးဆုံးမပေးကြပါ
အွန်လိုင်းမှာသူများတွေကိုဘဲတင်ဖို့ မပြောခင်မှာ..ခင်ဗျားရဲ့ ပုံတွေ (ဖေါ်ပြ + လုပ်နေတဲ့ပုံ)ကိုအယင်ဆုံးတင်ပါလား..
တော်တော်လေး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းအသုံးအနှုံးကို အလွယ် တကူ နှုတ်ကနေ ပြောထွက်နိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းဘဲ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားမှာ ဗမာမ ချွတ်တာဖေါ်တာဘဲ အဆင့် အတန်းရှိတယ်တဲ့။ ဗမာပြည်မှာ အနုပညာရှင်အားလုံး ဟာ အဆင့်အတန်းမရှိဘူးတဲ့။ အသိပညာ၊ ဆင်ချင်ဥာဏ်ရှိတဲ့ လူဟာ ဘယ်တော့ စကားတခွန်းကို လွယ်လွယ်နဲ့မပြော တတ်ဘူး။
It's Myanmar water festival.We must know our culture.
ကြိုက်ကုန်း လို့သူ့ ကိုပြောနေကြတယ်။ သနားပါတယ်။
ညီမငေး... ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ ရမလဲဟင် ၊ အကိုကြီးက ပန်းသေနေလို့ ပါ ခွိခွိ ။ ညီမလေး ရုပ်ကြောင့်မတောင်တာ လို့ မထင်ပါနဲ့။
her words is not standard.....
hay ..missburmese ..don't insult to all of myanmar girl...u r so fucking proud urself...we don't believe u r standard lady ...bec ur words is so bad...u known.... ur words show ur standard ......ok ..don't say like that next time ..watch ur mouth...
we agree with above comment .....the person who give above comment is genius...thanks
she got point i think. but abit rude to say in the public. can be change to nicer words n tone tot.
Lead by example or You dont have to lead by example ?Anyway your intention was appreciated .Do as I say,Dont do as I do.Proud of you sinMyanmar ma ma.
Ha,ha....i like this.
missburmese..Someone say ,,u look like thai prostitute...how about ur feeling ?..u like that ?..if u don't like that ..don't say like that to anybody....
ဘာဖြစ်လို့ ကော်မန့် ရေးတာကိုမတင်ပေး